musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nzira yekurapa sei kushaya hope uye anti-anxiety?
Banana inorova kushaya hope uye anti-kufunganya, yakabvumidzwa neUS FDA.
TCI Co., Ltd. yagara ichiita tsvakiridzo nekuvandudza maganda emabhanana uye stamens yebhanana, uye yakazopasa mvumo yeUS FDA NDI pakati pegore rino, ikava bhanana rekutanga pasi rose. Icho chiitiko chakakosha kuti zvigadzirwa zvebhanana zveTaiwan zvipinde munyika, uye ine mukana uri nani wekutora makumi emabhiriyoni emadhora mukudya kwehutano muUnited States.
Iyo TCI yekuTaiwan yakazivisa kuti "Banana Peel, Banana Stamen" yakagamuchira FDA's nyowani yekudya yekuwedzera musanganiswa NDI chengetedzo mhinduro, uye yakabvumidzwa kuti inyore pamusika weUS. Iyi zvakare ndiyo nyaya yekutanga munyika kuti itsva yekudya yebhanana inorwisa-kuzvidya moyo mbishi uye nyowani yekudya yebhanana yechirume yehutano yakagadziriswa yakasimbiswa neUS FDA, iyo inotarisirwa kutyaira indasitiri yebhanana yepamba uye kupinda mumakumi epasirese. yemabhiriyoni emadhora mumusika wezvokudya zvine utano. Bhanana peels uye stamens yebhanana inoshandiswa munyika dzeEurope neAmerica, nokuti hapana nhoroondo yezvokudya zvakakosha uye zvigadzirwa zvekare munguva yakapfuura, kana mukushandiswa kwezvokudya zvehutano kana kukurudzirwa kwemishonga yemishonga, yakagara yakaoma. Munguva yakapfuura, mabhanana peels, akadai semarara ekurima ayo akatanga kuraswa uye aigona kungoshandiswa semarara ekicheni, ose akashandurwa kuva zvinhu zvakakosha zvezvokudya zvine utano pasi pesimba rakasimba rekugadzirwa kweTCI.
Huwandu hwevanhu vari kutambura nekushushikana uye kuora mwoyo munyika huri kuwedzera gore negore. TCI's original patented "Banana Peel Ultrasonic Cold Extraction", iyo inofadza bhanana yakatorwa kubva mubhanana peel, ine zvigadziro zvakafanana kune melancholic drug Prozac, iyo inogona kuwedzera zvakanyanya kushungurudzika, kuzvidya mwoyo uye kushaya hope. Chidzidzo chemhuka chakaratidza kuti zvakatorwa nemuromo zvebhanana peel zvinyorwa zvakawanikwa zvine anti-anxiety uye kuora mwoyo mabasa mukuita maitiro ekutarisa. Zvidzidzo zvakaratidzawo kuti mabhanana peels anogona kuvandudza tryptophan metabolism nzira inoenderana nejini kutaura, kusimudzira kugadzirwa kwe serotonin uye melatonin mumuviri wemunhu, uye kuwana mhedzisiro yekurara. Kugadzirwa kweHappy Banana kwakahwina mibairo yakati wandei yepasi rose, kusanganisira mibairo yakakosha uye menduru dzegoridhe paGeneva Invention Exhibition kuSwitzerland.
Mukuwedzera, Happy Angel anonyanya kushandisa mabhanana stamens, a-by-product of mabhanana, ayo akabudiswa anogona kudzivirira kuwedzera kweprostate. Zvidzidzo zvakaratidza kuti inogona kunyatso kudzikisa kugadzirwa kwe dihydrotestosterone mumasero e testicular uye nekudzivisa kupararira kwemasero eprostate evanhu. Yakahwinawo menduru yegoridhe kuGeneva Invention Exhibition. Zvino sezvo peel yebhanana uye stamen yebhanana zvatenderwa neUS FDA NDI, chinhu chakakosha kuti chigadzirwa chekurima cheTaiwan-bhanana chipinde munyika. Tsvagiridzo yakasiana-siana uye budiriro yemhedzisiro yemabhanana peels uye stamens yebhanana yakaunza budiriro nyowani kune hutano chikafu, uye zvakare munguva yedenda, ichipa vatengi sarudzo dzakawanda mukudya kwehutano.